BIRTA: GURYAHA DAWOOYINKA IYO KA HORTAGGA, DAAWOOYINKA LOO ISTICMAALO - SOOSAARKA DALAGGA
Sidee bikrad loogu talagalay caafimaadka aadanaha?
Birch - geed ayaa laga heli karaa inta badan. Waxay ku koraan beeraha, beeraha xagaaga iyo beeraha. Marka laga soo tago muuqaalkiisa quruxda badan, waxa uu bogsiiyay sifooyin. Maqaalkeena waxaan ku sharaxi doonaa sida caleemaha cagaarka loo isticmaalo daawada dhaqameed.
Caleemaha Birch - dukaanka alaabta waxtar leh ee jirka aadanaha. Tixgeli ka kooban.
Alcohol butyl. Sababtoo ah isugeyntiisa gaarka ah, waxay awood u leedahay in ay saameyn togan ku yeelato xubnaha.
Phytoncides Muhiim u ah in la joojiyo bakteeriyada iyo fayraska waxyeelada leh.
Saliid muhiim ah. Waxay leedahay ficilo anti-bararka iyo anti-bakteeriyada, si fiican u barafeeyaa.
Tannins. Awood u leh in uu joojiyo dhiigbaxa iyo shubanka, yareeyo geedi socodka nabarka iyo bogsashada xawaaraha.
Xumad Ku darso habka caadiga ah ee habka dheef-shiidka, hagaajinta cuntada.
Flavonoids. Waxay leeyihiin antispasmodic, tallaalka wadnaha iyo bakteeriyada.
Saponins. Walxaha leh saameeyeyaasha iyo waxyeelooyinka ka-horjeeda.
Ascorbic acid. Waxay xoojisaa xididdada dhiigga waxayna ciribtirtaa dhiigbaxa.
Nitrotinic acid. Waxay leedahay saameyn togan oo ku aaddan hawlaha habka dhexe ee dareenka.
Caleemaha Birch iyo burooyinkeeda waxay leeyihiin guryo bogsiin oo gaar ah, laakiin ha ilaawin waxyaabaha ka hortagga ah ee aan ka hadli doono wax yar ka dib.
Ma taqaanaa? Heerka ugu yar ee bjørk - noocyo badan oo cilad ah, kama badna 1.5 mitir.
Waxaa haboon in la xuso faa'iidooyinka gaarka ah ee shimbir beerta, kaas oo ah in la ururiyo guga hore - waxay ka caawisaa xoojinta nidaamka difaaca. Waxaa lagula talinayaa in aad cabto maalin 1-2 koob maalintii saddex jeer maalintii 1-2 bilood. Burooyinkeeda Birta ayaa hodan ku ah saliidaha lagama maarmaanka ah, oo ay ku jiraan flavonoids, reins, fytoncides. Waxaa loo adeegsadaa sida diaphoretic, duriinka, choleretic, expectorant, antiseptic, antiviral, wakiilada anti-bararka iyo antifungal. Kelyuhu waxay ka caawiyaan ka hortagga laabotooyinka, waxay yareeyaan dareemeyaasha xanuunada ee kudubyada, la dagaalanka finanka iyo finanka, sariiraha. Faleebo waxaa inta badan loo qoraa xanuunada mareenka caloosha iyo mindhicirka.
Jilib bjørk iyo qaybo kale ayaa leh hanti daweyn waxana badanaa loo isticmaalaa ujeedooyin daaweeyn, inkastoo qaar ka mid ah khatarta. Tixgeli cuntooyinka caanka ah.
Maraq laga soo baxo caleenta. 30 g oo caleenta ah ku shub 400 ml oo biyo ah kuna kari kulaylka hooseeya ilaa 15 daqiiqo. Ka dib markaa, waxaa la sifeeyaa oo ku dar shaaha cabbitaanka soodhaha. Decoction waxaa loo isticmaalaa sida choleretic iyo wakiil maqnaashaha, for kareemo, sida u qubeyska cambaarta. Isticmaal gudaha gudaha 100 ml saddex jeer maalintii.
Waa muhiim! Marka qalajinta qaybo ka mid ah geedka waa in aan loo oggolaan inay ku dhuftaan iftiinka qoraxda.
Faleebo caleemo. Waxaad u baahan doontaa 1 tbsp. beedka iyo caleemaha la qalajiyey iyo 1 koob oo biyo nadiifa ah. Maaddooyinka waa isku dhafan, waxay u dhexeeyaan 20-30 daqiiqo. Taas ka dib, faleebo ayaa la sifeeyaa waxaana loo isticmaalaa daawada duriinka iyo diaphoretic.
Faleebo si aad u nadiifiso jirka. 8-10 g oo la qalajiyey ama 10-15 g caleemo cusub waa in lagu dhajiyo 200 ml oo biyo ah heerkulbeeg. Ka dib markii faleebo 5cm, waxay qaadataa 1 qaado oo 4 jeer maalintii. Waxay kaa caawinaysaa inaad ka takhalusto sunta.
Dhirta waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa daawada dhaqameedka: quince, acacia, hellebore, qoryaha, qoryaha, yew, caan, safs, kor, buur buur iyo lini.
Gaar ahaan caan waa burooyinkeeda bjørk, kuwaas oo bogsiinaya guryaha waxayna leeyihiin dhawr khilaaf.
Decoction ee burooyinkeeda bjørk. Si aad u karkariso maraq, waxaad u baahan tahay inaad qaso 200 ml biyo karkariyo leh 10 g oo buro qallalan. Karkari isku dar ah kuleylka hooseeya iyo kari ilaa nus saac. Ka dib markii laga saaro saxanka, maraq waa in la soo dhajiyaa 10 daqiiqo, marxaladda xiga waa la sifeeyaa. Isticmaal 3-4 qaado maalin kasta. Waxay u fiicantahay sida duriinka iyo faleebaha, waxaa loo isticmaali karaa sida jeermi-dilista.
Waa muhiim! Daaweynta Birchigu kuma habboona isticmaalka penicillin iyo daawooyinka gulukooska ku salaysan ee xididada!
Tincture khamriga. Wixii tincture u baahan tahay 15 g oo buro, kuwaas oo ka buuxsamay 0.5 litir oo vodka ama aalkolo. Xalka wuxuu ku jiraa meel gudcur ah illaa bil gudaheed. Waxaa lagula talinayaa inaad ruxayso weelka maalin kasta. Hal bil ka dib, waxaa haboon in la sameeyo filtering, ka dib markii taas oo tincture lagu shubay dhalooyinka mugdi madow iyo ka tagay meel qabow.
Tincture waxaa loo isticmaalaa haddii kelyaha, kaadiheystu si liidata u shaqeyso, iyadoo ay joogaan boogta faafa. Si loola dagaallamo Gooryaanka waa inaad cabtaa 25 dhibcood, iyaga oo biyaha ku daadanaya. Xallinta haragga maqaarka, loo isticmaalo daaweynta finanka iyo boogaha.
Wuxuu qabtaa kondomoolka guriga
Geedka waxaa si firfircoon loogu isticmaalaa kiknoolajiyada. Waxaanu bixinaa si aad u ogaato cuntooyinka ugu caansan.
Caleemaha bjørk ayaa bogsiinaya guryaha. Si aad u xoojiso timaha oo aad u tirtirto niyadjabkeeda, ka dib markaad madaxa dhaqeyso, waxaa lagama maarmaan ah in aad ku tirtirto adoo adeegsanaya caleenta caleenta. Iyadoo la raacayo ficilada walxaha gaarka ah, timaha timaha ayaa xoojin doona qaabka timaha u hagaajin doona. Si kastaba ha noqotee, haddii prolapse uusan joojin, waxaa lagama maarmaan ah in la raadiyo sababaha qoto dheer - laga yaabo in alopecia ay tahay natiijada cudurada gudaha gudaha.
Daryeelka maqaarka. Haddii aad leedahay maqaar qallalan, masaasad caleen ah ayaa kaamil ah. Waa in la jajabiyaa, iyo 2 qaado oo ah gaasta isku qasan 1 qaado oo ah labeen dhanaan iyo 1 qaado oo malab ah. Ka dib markaad isku walaaqdo walxaha si fiican, waxaa loo isticmaali karaa maqaarka. Sug ilaa 20 daqiiqo oo biyo ku diirso maaskarada.
Maaddada kondomoole waxay sidoo kale isticmaalaan: nasturtium, dogwood, enoteru, dabocase, periwinkle, peony, cherry shimbir iyo parsnip.
Hagaajinta guud ee xaaladda maqaarka. Si loo wanaajiyo xaalada maqaarka ayaa caawin doonta barafka. Si tan loo sameeyo, baraf maraqa caleen ka dibna haragga maqaarka ku tirtir barafka. Sidaa darteed, dhuumaha ayaa la nadiifin doonaa, socodka dhiigga ayaa hagaajin doona.
Waa muhiim! Tincture on khamriga looma isticmaali karo si aad u tirtirto maqaarka qalalan.
Ururinta, diyaarinta iyo keydinta alaabta ceeriin ee caafimaadka
In diyaarinta qayb kasta oo ka mid ah warshadda leedahay sifooyinka gaar ah.
Burooyinkeeda Birta. Waqtiga ugu wanaagsan ee la ururiyo waa Janaayo iyo Maarso, ka hor inta aan la bilaabin kala dirista. Ka dib markii la jarayo laanta, waa lagama maarmaan in la xidho oo qallalo 3-4 toddobaad. Waxay ku jajabin karaa balakoonnada, waddada - waxa ugu muhiimsan waa in la bixiyo hawada. Ka dib qalajinta, waxaa lagama maarmaan ah in la yiraahdo kelyaha, kala saar digsiyada oo mar kale ku qalalan. Burooyinka la qalajiyey ee la dhammeeyaa waxay uriyaan wanaagsan, midab madow, iftiin yar iyo dhadhan qadhaadh. Waxaad ku kaydin kartaa wax ka badan 2 sano.
Goolka Birch. Ururku wuxuu ku dhacaa socodka dheecaanka, bisha Maarso - ka hor inta caleemaha bilaabaan inay ubaxdo. Dooro geedo loo qorsheeyay in la gooyo 2-3 sano. Marka jeexitaanku ka soo baxo 2 cm Marka la ururiyo casiirku dhammaato, waxaa lagama maarmaan ah in lagu xiro godadka dhirta qoryaha ah iyo daboolaya beerta beerta. Ku kaydi juuska waa inay ahaataa xaalad xiran iyo qol qabow.
Waxa kale oo laga yaabaa in aad ka faa'iido leh iyo casiir macaan oo laga sameeyey laga bilaabo abrikot, fersken, dogwoods, tufaax, isbinaajka, karootada, lemongrass Chinese, milkweed iyo Kalanchoe.
Caleemaha Birch. Ururinta waxaa ugu wanaagsan in la sameeyo May, oo ku haboon in lagu qalajiyo qiiqa ama carport. Caleenta waa in si fiican loo qalajiyaa, sida haddii caleen cillad ah ay weli joogaan, caaryadu way kobcin karaan. Waxaad ku hayn kartaa ilaa 2 sano. Diyaarinta sariirta qubeyska ayaa ka wanaagsan in la hirgeliyo tobanka sano ee saddexaad ee bisha Juun, marka dhan caleenta la kala diro.
Berbera. Diyaargarow waxaa lagu sameeyaa geedo dhowaan la gooyey. Iyadoo mindi fiiqan lakabka caddaanka ah ee jilifku waa la jeexay. Jilib bjørk waa inuu si fiican u qalajiyaa.
Guryaha bogsoon leh iyo boogaha bjørk, laakiin waa muhiim inaad ogaato goorta iyo sida loo soo ururiyo. Waxay u muuqdaan dabayaaqadii May - horraantii Juun, ka dib caleemaha. Waa lagama-maarmaan in la kala saaro haweeneyda (staminate) dhirta haweenka (pistillate). Ragga way weyn yihiin waxayna kortaan laba illaa afar qaybood; dumarka - yaryar, midba midka kore.
Ma taqaanaa? Midhaha geedka waa nuts yaryar, 1 garaam oo ka mid ah qiyaastii 5000 miraha.
Caqabadda ugu weyni waa dulqaad shakhsi ah. Intaa waxaa dheer, waxaa laguma talinayo in la isticmaalo burooyinkeeda geedka dadka qaba cudurrada kalyaha, sida reeriin ay sababi karto xanuunka. Waxaa fiican in la isticmaalo maraqyada caleen. Codso infusions of kelyaha waa ka dib markii la hadal dhakhtarka. Laguma talinayo in daawooyinkaas loo isticmaalo muddo dheer. Sidoo kale waa mamnuuc inaad u isticmaasho daawooyinkaas dumarka waqtiga uurka iyo nuujinta.
Birch ma aha oo kaliya geed aad u qurux badan, laakiin sidoo kale ilaha nafaqada. Iyada oo si haboon loo isticmaalo decoctions iyo infusions, waxaad ku guuleysan kartaa natiijooyin wanaagsan ee ka hortagga iyo daaweynta cuduro badan.